Tuesday January 21, 2020 - 12:41:28 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markii ugu gorraysay dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay ku biirayso dowladaha shisheeye ee damacu uga jiro in ay dhurtaan shidaalka dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Turkiga Erdogaan ayaa maalintii Isniinta iclaamiyay in dowladda Farmaajo ay dalkiisa ku marti qaadday in ay shidaal ka baarto badda Soomaaliya.
Isagoo wariyaasha kula hadlayay magaalada Anqara kadib markii uu kasoo laabtay shirkii Jarmalka ka dhacay ee arrimaha Liibiya looga hadlayay ayuu sheegay in dowladdiisu heshiis dhanka baarista Gaaska ah lageli doonto dowladda taakta daran ee Soomaaliya ka jirta.
"waxaa jira martiqaad iiga yimid Soomaaliya waxay leeyihiin badaheena waxaa ku jira shidaal adigu arrinkaas Liibiya ayaad ka sameynaysaa balse halkaan oo soomaaliya ah waad ka sameyn kartaa" sidaas waxaa yiri madaxweynaha Turkiga.
Telefeshinka NTV ayaa baahiyay muuqaalka Erdogaan oo ka hadlaya in dowladdiisu shidaal ka baari doonto xeebaha dalka Soomaaliya, dowladda Turkiga ayaa kaalin weyn ku leh duullaanka Soomaaliya lagusoo qaaday waxay tababarro melleteri iyo mid dhaqaale siisaa ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Federaalka
Mas'uul katirsan dowladda Faransiiska oo cudurka Carona udhintay.
Maamulka 'Jubbaland' oo beeniyay in uu wadahadal lafuray dowladda Farmaajo.